တချိန်ကစစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေအတွက် " လူ နဲ့ မူ " ဆိုတာ | CNA-Asia
တချိန်ကစစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေအတွက် ” လူ နဲ့ မူ ” ဆိုတာ
December 17, 2019 By admin General Knowledge
ဒီနေ့ လက်ဘက် ရည်ဆိုင်မှာ အသိလူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတုန်း ဘေးနား စစ်ကားတစ်စီးဖြတ်အသွား အဲဒီလူကပြောတယ် စစ်သားဆို ကြည့်လို့ကို မရဘူးတဲ့…
ကျနော့်စိတ်ထဲက သိချင်စိတ်ကြောင့် အကို ဘာကြောင့်စစ်တပ်ကို မုန်းတာလဲ အကြောင်းပြချက်လေးပေးပေးပါလားဆိုတော့ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲနဲ့ မုန်းတာဆိုပဲ..အဲ့မှာ ကျနော်မေးကြည့်တယ် အကို့အပေါ် စစ်တပ်က အနိုင်ကျင့်ဘူးလား ဆိုတော့..မကျင့်ဘူးတဲ့..ဒါဆို အကို့ မိသားအပေါ် အနိုင်ကျင့်ဘူးလား ဆိုတော့လဲ မကျင့်ဘူးတဲ့.ဒါဆို အကို က စစ်တပ်ကို ဘာလို့မုန်းတာလဲ ဆိုတော့ သူက… စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် ငါတို့ တိုင်းပြည်မွဲတာတဲ့ စစ်တပ်ဆိုအားလုံးမုန်းတယ် ဒါကြောင့် ငါလဲမုန်းတယ်တဲ့..သူများမုန်းတာနဲ့ အကိုက လိုက်ပြီး မုန်းတယ်ပေါ့ အာ့လိုလား .အကိုမိသားစု ကို သူများမုန်းနေရင်လည်း အကိုက လိုက်ပြီးမုန်းမှာပဲလားဆိုတော့ သူတွေဝေနေတယ် ..
ကျနော်ဆက်ပြီး ပြောပြတယ်..အကိုသိအောင်ကျနော် ပြမယ်ဆိုပြီး ကျနော်ခေါင်းက တစ်လက်မလောက်ဒဏ်ရာဟောင်းကို ပြလိုက်တယ် ဒီဒဏ်ရာက စစ်တပ်က သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုထားလို့ရတဲ့ သေရာပါ ဒက်ရာပါ အကိုလိုဆို ကျနော်က စစ်တပ်ကို ပိုပြီး မုန်းသင့်တာပေါ့.
ဟုတ်တယ် ကျနော် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မုန်းတယ် ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်ကို မမုန်းဘူး လူ နဲ့ မူ ကို ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ် ယနေ့တပ်မတော်ဟာ အကိုတို့မုန်းတဲ့ အာဏာရှင် တပ်မတော် မဟုတ်ဘူး ပြည်သူနဲ့ တစ်သားကျဖို့ကြိုးစားတည်ဆောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တပ်မတော်ဖြစ်တယ် ရေဘေး လေဘေး မီးဘေး အန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကိုကူညီနေတာတွေသိနေမြင်နေတာပဲလေ ဒါကိုလက်ခံရမယ် သားသမီးတစ်ယောက်ဆိုးပေတေနေတာကိ နောင်တရလို့ ပြုပြင်ပြောင်လဲပြီး မိဘနဲ့အတူနေဖို့ကြိုးစားနေတာကို မိဘလုပ်သူက မင်းက တစ်ချိန်က လူဆိုးပဲ လူမိုက် စတဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် ပုတ်ခက်နေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သားသမီးအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူး မိဘ အပြစ်သာဖြစ်တယ် အကိုလိုပဲ အချို့စစ်တပ်ကိုမုန်းနေသူတွေဟာလဲ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိကြဘူး သူများမုန်းလို့ မုန်းတယ် သူများချစ်လို့ချစ်တယ်ဆိုရင် အကို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်မရှိတော့ဘူးလေ ..
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အရမ်းအရေးပါတယ် နိုင်ငံအင်အားကို စစ်အင်အားနဲ့ တိုင်းတာနေတဲ့ခေတ်မှာ ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့ မလုပ်နိုင်တဲ့ လစာ ၁၃၀၀၀၀ အပြင်အလုပ်မလုပ်ရ မိသားစုမျှသုံးနေရတဲ့ စစ်သားအလုပ်ကို အကြောင်းပြချက်မရှိမုန်းတီးနေမဲ့အစား နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် စည်းလုံးဖို့တည်ဆောက်ကြည့်ပါလား..ဒါဆို ကျနော်တို့နိုင်ငံစည်းလုံးပြီ စည်းလုံးရင် ဘယ် နိုင်မှမစော်ကားရဲတော့ဘူးဗျ ။
Credit ,ရေးသားသူ : နေသမိုင်း
တရုတ်က ပါကစ္စတန်ရေတပ်အတွက် Type 054A ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ် ၂ စင်းထပ်မံတည်ဆောက်ပေးမည်
ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အိန္ဒိယလေယာဉ်တင်သင်္ဘော အွန်လိုင်းမှ လေလံတင်
ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့အဓိကတာဝန် နဲ့ ပေးလိုက်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်
တပ်ရင်းမှူးကို ဆွဲမိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟု ကေအန်ယူငြင်းဆိုခဲ့
ရေငုပ်သင်္ဘောဆီသို့ ဒရုန်းအသုံးပြုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်
၂၀၁၉ စစ်တမ်းများအရ ၀င်ရောက်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်ကူနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံ
တရုတ်နိုင်ငံက ငွေသားမပါရင် QR Code နဲ့ ငွေပေးသွားပါဆိုတဲ့ သူတောင်းစား
မန္တလေးမြို့ရောက်ရှိနေသည့်တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့သား(၇၀)ကျော်ကိုတရုတ်အစိုးရကအထူးလေယာဉ်ဖြင့် ယခုညလာရောက်ခေါ်ဆောင်မည်
” အပျိုကြီးရဲ့နိမိတ်ကောက်မှားပုံ “😁😁
ရှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုခိုးယူ အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့အမျိုးသားကိုထောင်ဒဏ် နှစ် ၃၀ ချမှတ်ခဲ့
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အရေး အမေရိကန်အနေနဲ့ တရုတ်လိုအပ်သမျှ အကူအညီပေးရန် အသင့်ဟု သမ္မတ ထရမ့် ထုတ်ဖော် ပြော
တရုတ်၏ လက်နက်ဈေးကွက်သည် ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်သည်ဟု လက်နက်ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ ခန့်မှန်း
Su 30 တိုက်လေယာဉ်များ ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ လက်ခံရရှိမည်
အမေရိကန်လေတပ်ပိုင် လေယာဉ်အား တာလီဘန်တို့ပစ်ချ ၊ တာလီဘန်တို့ဝန်ခံခဲ့
တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦး၏ တစ်နေ့စာအလွဲများ 😖😖😖
အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမှာ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီး ပျက်ကျ၊ အသေအပျောက် မသိရသေး
သမိုင်းထဲက အမှန်တရား (အကောင်းနှင့်အဆုံးနိုင်ငံရေးစနစ်)
” တရုတ်ကပ်ဆိုက်ပြီ ” ဘီလ်ဂိတ် ကပွဲတပွဲမှာ (၆) လအတွင်းတရုတ်မှာ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပြီးလူသန်းဂဏန်းနဲ့သေမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကြိုပြောနိုင်ရတာလဲ ?
ဘက္ကဒက်က အမေရိကန်သံရုံးဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ခံရ၊ ဝန်ထမ်းများ ဒဏ်ရာရ
မြန်မာ – တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်များကို ယာယီပိတ်ရန် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံ တင်ပြထားသော်လည် နှစ်ရက်ကြာသည်အထိ အကြောင်းမပြန်
အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့၏ ကုန်ကျစားရိတ်အတွက် ဆော်ဒီက ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ပေးထား
ရုရှားမှာ သေသူရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေခဲရိုက်ပြီး၊ အသက်ပြန်သွင်းပေးမယ့် ကုမ္ပဏီပေါ်ထွက်လာ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတစ်ဦး ပထမဆုံး စတင်ကုသပျောက်ကင်း – (အိတ်အိုင်ဗွီ) ဆေးများကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာများအား ကုသရာတွင် အသုံးပြု
နာမည်ကျော် အမေရိကန် ဘတ်စကက်ဘောသမားနှင့် သမီး ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ၍ သေဆုံး
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် နှာခေါင်းစည်းများ အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေး- နှာခေါင်းစည်းများဝယ်ယူရန် ခက်ခဲလာ
တာလီဘန်အဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်ရယူပြီးပါက အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားရေးကို အာဖဂန်ပြည်သူထက်ဝက်နီးပါးက အလိုရှိ
ရန်ကုန်မိုးပျံ အမြန်ကားလမ်းကို ယခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စတင်ဆောက်လုပ်မည်
ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ ငှက်များ အဆိပ်မိခဲ့ပြီး နှုတ်သီးနဲ့မျက်လုံးထဲမှ သွေးထွက်ကျပြီး ငှက်ကောင်ရေ(၆၀) ကောင်းကင်မှ ပြုတ်ကျလာမှု
မြောက်ကိုရီးယားမှာ အပျိုစင်အမျိုးသမီးငယ်တွေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ဖျော်ဖြေပေးဖို့ စုဆောင်းခံနေရ
ဂျပန်ဘီလျံနာနှင့် အတူ လကမ္ဘာကို သွားမယ့် ရည်းစား ကောင်မလေးဖြစ်ခွင့် လျှောက်ထား သူ (၂၀၀၀၀) ကျော်ရှိလာ
ကချင်ပြည်နယ် ပန်းဝါဒေသတွင် မြန်မာပိုင် တန်ဖိုးမြင့် မြေရှားသတ္တုများ နေ့စဉ် ခိုးထုတ်နေ
မဟာသီယာဆီက အသံထွက်လာပြီရို တွေကိုနိုင်ငံသားပေးသင့်ကြောင်း
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ တရုတ်ရဲ့ လျှို့ဝှက် ဇီဝစစ်လက်နက်ပရိုဂရမ် တစ်ခု ကနေ လွတ်ထွက်ပြန့်ပွားလာခြင်းဖြစ်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လာ
အမေရိကန်သံတမန်များနှင့် နိုင်ငံသားများကို ဝူဟန်မြို့ကနေအမြန် ရွှေ့ပြောင်းဖို့ စီစဉ်
၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအတွက် သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန် မဲဆွယ်ပေးတော့မည်
မေရိကန်အပါအဝင် နိုင်ငံ (၄) နိုင်ငံအား မျိုးဆက်သစ်ရေဒါဖြင့် ကာကွယ်ပေးသွားမည်ဟု လောဟိမာတင် ကထုတ်ပြန်ထား
အမေရိကန်လေတပ်၏ ပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာ တရားဟောဆရာ Brett Campbell
ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်သွားတဲ့ ဗေဒင်တွက်ကိန်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် နိုင်ငံဟာ စိုးရိမ်ဖွယ်အနေအထားနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီဟု တရုတ်သမ္မတထုတ်ပြောပြီ
တရုတ်နှစ်ကူးမှာ ဘာကြောင့် အန်ပေါင်းပေးတာလဲ? ဘာကြောင့် တီကွေ့မုန့် စားကြတာလဲ?
ဘရာဇီးကြည်းတပ်အနေနဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၂၃ခုနှစ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ့် မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်ဖို့ တရုတ်တပ်မှ ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူတွေ ဝူဟန်ကိုစတင်ရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဂျပန်ယန်း ၁၂၀.၉ ဘီလီယံထုတ်ချေးပေးခဲ့
မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရရဲ့ ဦးနှောက်ဖောက်စားခံလိုက်ရတဲ့ စပိုင်ကင်မ်ယန်ဟီးရဲ့ရာဇဝင်
ပလက်ဝ နှင့် မောင်နှမရွာကြား အေအေ ၄၀၀ပိတ်မိနေ
သတိထားချိန်တန်ပြီ ဝူဟန်ရောဂါ (ကိုရုုိနာဗိုင်းရဗ်စ်ပိုး) မိမိကိုယ်မိမိကာကွယ်ဖို့
အိန္ဒိယက နျူကလီးယားထိပ်ဖူးတပ်ဆင်ထားသည့် ကေ-၄ ဒုံးကျည်ကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့
မလေးရှားတော်ဝင်ရေတပ် အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ကေဒီ အတန်းအစားတိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ် လက်ခံရရှိ
လာမယ့် (၂၀၃၀) တွင် စစ်တပ်ကရေငုပ် သ င်္ဘော အုပ်စုပိုင်ဆိုင်ရန်ရည်မှန်းထားကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ပြော
တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကိုအမှန်တစ်ကယ် စိုးရိမ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ ထောက်ပြ
နတ်ကြောက်လို့ မျိုးမပြုတ်တဲ့ စိမ်းစိမ်းစိုသောစွာကျန်ရှိနေသော ဇီးအိုတော
© CNA-Asia 2020 CNA-Asia2020 • Themaga powered by WordPress